Hofisi & Hotera Yekuzvishandira Keys Machine ine Chiso ID uye Fingerprint
Yepamberi kumeso kucherechedzwa uye kurarama zvipenyu kugunwe zvigunwe kuziva chokwadi kuti ikupe iwe imwechete uye kaviri mvumo yekusimbiswa
Landwell akangwara kiyi bhokisi pamusoro chengetedzo manejimendi system kabhini
Landewell Intelligent Key Management Kabineti nemaLockers akagadzirirwa kuchengetedza makiyi, zvishandiso, kana zviridzwa zvakachengeteka, uye nekuzvibata nenzira inotarisirwa uye nemvumo. Aya makabhati akangwara akabatanidza makabati akakosha uye makiyi pamwechete. Iwo makabati aigona kuvhurwa chete neako wega RFID proximity kadhi (transponder), kana / uye nePIN kodhi, kana / uye nechiratidzo cheminwe. Vashandisi vanokwanisa kuvhura chete iwo makiyi uye votora chete iwo makiyi avakabvumidzwa.
• Inonyatso kuzivikanwa tekinoroji yeRFID inoita kuti system ive otomatiki
• Girazi reMMAMA kana musuwo wesimbi isina chinhu kuita kuti makiyi ave akachengeteka
Vashandisi vane mvumo chete ndivo vanokwanisa kuwana kiyi dzakapihwa imwe nguva
• Kiyi dziri pasi pekutonga kuburikidza ne Hardware uye software chaiyo-nguva
Landewell akangwara kiyi manejimendi sisitimu inotora yazvino RFID tekinoroji kuti ikubatsire kuronga zuva nezuva makiyi nezvinhu zvakakosha zvine hungwaru.
H2000 inogona kuve nechokwadi chekuchengetedzwa kwemidziyo yemushandisi, chengeta makiyi kwaunenge uchinyanya kuada, uye woatora chero nguva, chero kupi
haigone kushandiswa pasina mvumo uye inogona kusarudza kuti ndiani anoshandisa zvinhu mune imwe nguva. Iyo inoderedza manejimendi mutengo uye inopa yakaringana kudzora kune akakosha maitiro.
Akangwara Kiyi manejimendi Sisitimu A-180E Ine USB Connector
A-180E inopa kurongeka kwakakwana kwemakiyi gumi nemana uye zvidiki zvakakosha zvekambani yako. Vashandisi vane mvumo chete ndivo vanowana kiyi pamwe nemamiriro emasimba. Zvakare, vashandisi vane mvumo vanozviratidza ivo pachavo (mukati menguva yakatarwa nguva) kuburikidza nekadhi rekushandisa, password uye zvigunwe zvemunwe pachigadziko. Zvese zvese senge kutora nekutora makiyi zvichaonekwa zvizere mumishumo yakasiyana.
i-keybox-8 Diki Bhokisi Ine Management System Uye Kiyi
Landewell CE chitupa Kiyi manejimendi Kabineti inotora iyo RFID tekinoroji ita kuti makiyi ako uye zvinhu zvive zvakachengeteka kuti ushandise, Ruzivo rwacho rwunyorerwa kune wega mushandisi uye zvinhu, uye gadzira mushumo wezvakakosha zvinhu.
Landewell Commercial Key Management System Bhokisi rinotora iyo RFID tekinoroji iri nyore kushandisa. nyora nenzira kwayo kushandiswa kwekiyi (zita, kiyi zita, nguva yekudzoka, nezvimwewo) chengeta makiyi kwaunonyanya kuada, uye woatora chero nguva, chero kupi.
• PMMA girazi kana musuwo wesimbi isina chinhu kuita kuti makiyi ave akachengeteka zvakanyanya
• Vashandisi vane mvumo chete ndivo vanokwanisa kuwana kiyi dzakapihwa mune imwe nguva
• Makiyi ari pasi pekutonga kuburikidza nehardware uye software chaiyo nguva
Landewell Kiyi Kabineti Ine Dhijitari Management Sisitimu kubva kune yakapfava yakachengetedzwa sarudzo dzekuchengetedza kune-bhizinesi-nhanho kudzora kwezvinodhura kana zvakaomarara zvishandiso, inopa inonzwisisika uye ine simba nzira yekugadzirisa, kuteedzera uye kurondedzera kushandiswa kweakanyanya kukosha efa.
Landewell Kiyi Kabineti Ine Musanganiswa Management Sisitimu inotakurika uye yakagadzirirwa kuti ikwane zvese zvinoshandiswa. Iyo inoshandisa mapiyona ekugadzirisa kugadzirisa akakosha zvikamu zvesangano.
i-keybox-100 yedhijitari kiyi yakachengeteka kabhineti
Landewell Magetsi Kiyi Kudzora Kabineti inokwanisa kuteedzera yega kiyi mamiriro ayo chaizvo kuitira kuti makiyi ese agone
kutarisirwa zvine hungwaru. Iyo chaiyo nzira yakanaka yekukubatsira iwe kugadzirisa akakosha manejimendi matambudziko. kuderedza njodzi uye manejimendi mutengo, kunatsiridza kugona kwebasa.
i-keybox-200 hombe kiyi yekuchengetera kabhineti
Landewell akangwara kiyi manejimendi sisitimu inotora yepamusoro RFID tekinoroji kuti ikubatsire kuronga mazuva ese makiyi uye zvakakosha zvinhu.
Inokiyiwa Key Kabineti, Key Management Cabinet, Diki Bhokisi Management System Uye Kiyi, Iyo Bhokisi Yekudzivirira Kiyi, Makuru Makuru Ekuchengetera Cabinet, Yakarembera Kiyi Bhokisi,